Hal Wax Oo Haddii Aan Sameyno Aan Kula Tartami Karno Waddamada Shiinaha Iyo India!! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Hal Wax Oo Haddii Aan Sameyno Aan Kula Tartami Karno Waddamada Shiinaha...
Ummad walba oo adduunka ku nool waxa ay leedahay udub dhexaad jiritaanneed, kaas oo haddii la waayo ummaddaas kala dhantaalli yaqaanna.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ummadaha ay wadaagaan waxaa kamid ah dadka iyo dalka.
Dalka waa muhiim oo cunsurkan haddii la waayo waxaa ay la micno tahay in ummaddaas ay caalamka intiisa kale ay ku kala firdhismeyso oo aanay lahaayeen meel saldhig u ah oo laga heli karo.
Sidoo kale waxa ay dhibaato dal la’aantu u tahay ubadka iyo jiilka xiga ee reerkaas ay yeelan lahaayeen, sidaa darteeda waxaa lagu tilmaamaa ummdaha adduunka kuwooda aan reerraha ama waddamada lahayn in ay yihiin kuwa ugu liita caalamka, islamarkaana ku dayac darreysan qeybo badan oo kamid ah waddamada loo qaxooti tago.
Hadddaba waxa inoo soo baxaya in ay muhiim tahay in aan wax badan ilaalsanno dalka ama dhulka, si aan u helno meel aan ku noolaanno.
Dadka:- waa cunsurka ugu muhiimsan jiritaanka ummadaha, ha yeeshee inta badan ma arkaan dunida saddex aad dadka ku nool middaas. tira koobyo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in ummadaha ay usii jiritaan dheer yihiin sida ay u kala dhalmo badan yihiin, islamarkaana ummadba ummaddey ka dad badan tahay ayeey ka rejo iyo hammi badan tahay mustaqbalka fog.
Chine iyo India waa labada dal ee ugu sareya dhanka kala sareynta admiga nool, sidaa darteeda waxaa jirto tira koob dhaqaalle iyo saadaallin caalami ah taas oo siineysa dalalkaas in ay noqon doonaan kuwa ugu sareeya dhaqaallaha adduunka, taasna waxa ay ku muteysteen dhalmada badan iyo kasbashada banii aadam tiro ahaan aan yareyn.
Haddaba dadka haddii ay yihiin udubka ugu muhiimsan jiritaanka banii aadamka, sidee bay Soomaalida kaga faa’iideysataa? waa sua’aal dhaxal gal ah oo ay cid walba ay iswayddiineyso, haddaba akhristoo iswayddii dadka Soomaalida ahmiyad nooce ah ayeey siiyaan dadkooda.